अारबीका शव्दलार्इ अर्जुनकाे धुनः 'तिम्राे तस्वीर' ले छुन सक्छ मन (२०७४ वैशाख ३१, आइतवार)
भुटि्नज नेपाली मूलका प्रतिभाहरू तेस्राे मुलुकमा पुनर्स्थापित भएयता ललितकलाका तीनै विधामा अाकास मागिरहेका छन् । नेपालमा शरणार्णी शिविरमा रहँदा अभावका कारण खुम्च्याइएका रहर र दाेहन भएका प्रतिभाहरू फैलाउने अभियान सुरू भएकाे छ । त्यसमा पनि अमेरिका पुनर्वासमा अाएका युवाहरूमा त रेनेसा नै सुरू भएकाे छ भन्दा पनि हुन्छ।
याे रेनेसामा गीत संगीतमा लागेका केही युवाहरूले त अाफ्नाे ब्राण्ड पनि बनाइसकेका छन् । त्यही ब्राण्ड बनाउने युवाहरूमा पर्छन्- गीतकार अारबी खड्का र संगीतकार तथा गायक अर्जुन रसाइली । अमेरिकाकाे अाेहायाे काेलम्बसलार्इ डेटलाइन बनाएर यी युवाहरू अाफ्नाे ब्राण्ड मात्र बनाइरहेका छैनन्, नेपाली गीत संगीतकाे श्रीवृद्धिमा याेगदान पनि गरिरहेका छन् ।
अहिले यी दुर्इ युवा जुगलबन्दीका साथ �तिम्राे तस्वीर� लिएर अाउने क्रममा छन् । अाखिर के हाे त �तिम्राे तस्वीर�? एउटै वाक्यमा भन्दा �तिम्राे तस्वीर� अारबी खड्काका शव्दमा अर्जुन रसाइलीले संगीत गरेका अाठवटा गीतकाे सांगीतिक काेसेली हाे । याे सुगम संगीतलार्इ अाधार बनाएर लाेक, पप, अाधुनिक र गजल फ्लेवरमा सजाइएकाे छ।
एलबमकाे शीर्षक गीत संगीतकार अर्जुन रसाइलीले नै गाएका छन् । जिउँनलार्इ तस्वीर हेर्नुपर्ने बहानाकाे याे प्रेमील गीत माया गर्नेहरूका लागि अजम्बरी लाग्छ। शान्त-सुखाय-सुगम गीतकाे छनक प्रस्तुत गर्ने गीत हेर्ने हैन, सुन्ने गीतकाे गतिलाे उदाहरण बनेकाे छ भन्दा अन्यथा लाग्दैन । लाेक पप फ्लेबरमा मनाेज ढकालले गाएकाे �यसपाली कान्छी भेट भकाे बेलामा� पनि दाेयम छैन । गम्भीर स्वरका धनी जगदीश समालले �अाज पनि त्यस्तै भयाे� लार्इ अन्याय हुन दिएका छैनन्। उनी अाफ्नै बान्कीमा जमेकै छन् यस गीतमा।
अहिले भुटि्नज नेपाली गीत/संगीतमा संख्या पनि चाहिएकाे छ। संगीतकाे थेसिसले पनि भन्छ, संख्याले गुण दिन्छ । पर्याप्त संख्या नभर्इ संगीतकाे समीक्षा पनि सम्भव हुदैन। साँच्चै भन्ने हाे भने अहिले संगीत समीक्षकहरू प्रवर्धककाे भूमिकामा हुनुपर्ने अवस्था छ।
एलबममा गायक सत्यराज स्वरूपराजले दुर्इवटा गीतमा स्वर भरेका छन् । �अाँखा राम्राे भनुँ कि म अाेठ राम्राे भनुँ � पप फ्लबेरमा फास्ट विटमा छ भने �तिमीले सल्कायाै मनमा अागाे� स्लाे बिटमा गतिलाे सुगम संगीत बनेकाे छ । अाचार्य वन्धुले गीतका शव्द र संगीतकाे कम्पाेजलार्इ न्याय गरेका छन् । उदय मनिलाकाे स्वरमा गुञ्जेकाे �युगाैयुग दिउला तिमीलार्इ� एलबमकाे एक सशक्त गीत हाे । संगीतलार्इ गम्भीर बनाउने याे जाेडीले याे गीतलार्इ पनि अाफ्नै संगीतकाे स्कूलमा तानेर कर्णप्रिय बनाएकाे छ। किरण गजमेरले पप बिटमा अाएकाे �तिमीसँग मनका कुरा खाेलु खाेलु� पनि युवापुस्तालार्इ तान्न सक्ने गीत बनेकाे छ । त्यस्तै, किशाेर शिवाकाेटीकाे स्वरमा रहेकाे �पत्थर मुटु बनाएर विदा मागी गयाै� अाफैंमा एउटा गतिलाे सुन्ने संगीतका रूपमा उपस्थित छ।
नेपाली गीत/संगीत क्षेत्रमा संगीतकाे समीक्षा गर्ने उम्दा परम्परा नै छैन। समीक्षाका नाममा या त प्रशंसा हुन्छ या त गाली । याे सिर्जनाभन्दा पनि सर्जकसँगकाे प्राेक्सिमिटीमा अाधारित हुन्छ। भुटि्नज नेपाली गीत/संगीत क्षेत्र पनि अपवादमा छैन।
�तिम्राे तस्वीर� एक श्रवणीय सांगीतिक काेसेली भएकाे छ। याे एलबम नेपाली गीत संगीतमा मूलधारकाे एलबमकाे काेटीमा छ। यसलार्इ परिचय दिनका लागि अरू विशेषण थपेर खुम्च्याउन जरूरी छैन । समय र स्थान जाेडेर बन्ने सन्दर्भकाे कशीमा नाप्दा पनि �तिम्राे तस्वीर� अायाराम गयाराम संगीत सिर्जना हैन। याे हेर्नेभन्दा पनि सुन्ने संगीतका पारखीहरूका लागि एक संग्रहणीय एलबम हुन सक्छ ।
तर, अपवादमा �तिम्राे तस्वीर� जमेर संगीत समीक्षा गर्न लायक एल्बम बनेकाे छ। भनिन्छ, गीत संगीत कम्तीमा पनि एक दशक बाँच्याे भने त्याे अायाराम गयाराम हुदैन, संगीत समीक्षाका लागि याेग्य हुन्छ। यस कडीमा �तिम्राे तस्वीर� समीक्षायाेग्य हुन पनि सक्छ। त्यसका लागि यस एलबममा संलग्न सबै संगीत श्रष्टा सर्जकलार्इ साेध्नुपर्ने हुन्छ, अबकाे १० वर्षपछि तपार्इ तिम्राे तस्वीरका सिर्जनालार्इ हातका अाैंलामा गन्न सक्नुहुन्छ? छातिमाथि हात राखेर भन्दा जे उत्तर अाउँछ, अहिलेका लागि याे एलबमकाे रेटिङ पनि त्यही नै हाे।
समग्रमा �तिम्राे तस्वीर� एक श्रवणीय सांगीतिक काेसेली भएकाे छ। याे एलबम नेपाली गीत संगीतमा मूलधारकाे एलबमकाे काेटीमा छ। यसलार्इ परिचय दिनका लागि अरू विशेषण थपेर खुम्च्याउन जरूरी छैन । समय र स्थान जाेडेर बन्ने सन्दर्भकाे कशीमा नाप्दा पनि �तिम्राे तस्वीर� अायाराम गयाराम संगीत सिर्जना हैन। याे हेर्नेभन्दा पनि सुन्ने संगीतका पारखीहरूका लागि एक संग्रहणीय एलबम हुन सक्छ ।
दोहा कतारमा निर्माण भयो पहिलो सालैजो गीत ( भिडियो सहित )
अर्घाखाँची धरमपानीका सन्तोष शर्मा म्युजिक भिडियोको अभिनय देखि छायांकनमा व्यस्त
अर्घाखाँचीका गायक तथा मोडल बिकाश दर्पन जिसीको घाँस भरेको डोको एल्बम बजारमा (भिडियो सहित)
मसालको रक्तिम सांस्कृतिक अभियानमा जीवन शर्मा जस्तै जन्मिए अर्का जनगायक हेमराज पुन
किरणवावु पुनको "वाचा" आयो (भिडियो सहित)
फिल्म साउथएसिया २०१७ अर्को हप्ता शुरू हुने
अर्घाखाँचीमा कमल सौराग एकल साँझ हुने
भारतीय वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक शाहको हृदयघातका कारण निधन
वरिष्ठ रेडियो कार्यक्रम सन्चालक एवं गायक वासुदेव मुनालको निधन
पहिलो नेपाल आइडल बुद्ध लामा
दोर्जे डोल्मा गुरुङको पोल्टामा मिसेस ग्लोबल २०१७को ताज
संगीतकार तथा गायक कमल सौरागको सन्धिखर्कको सभागृहमा एकल साँझ हुने
ठाडोभाकाका गायक भेंडीखर्के साइँलाको ८५ बर्षको उमेरमा निधन
ओ एस नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७४ सम्पन्न
योगराज पोखरेलको कमेडि गीत “ कुखुरी पहिले कि अण्डा बजारमा ( भिडियो सहित)
यो बर्षको मिसेस नेपाल आईडल २०१७ रक्की श्रेष्ठलाई